Ziri ezi / Igbe
Ventilet / Static
Ikwunye-na / Reomte
Friza / Chiller
Chinese 24 Solar Okwu ihe i nwere ike na-amaghị banyere End of Okpomọkụ
End of Okpomọkụ, (Chinese: 处暑), nke 14 anyanwụ okwu nke afọ, na-amalite afọ a na Aug 23 na-agwụ on Sep 6. End of Okpomọkụ na-egosi na ọtụtụ akụkụ na China na-igbu ndị na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ na-abanye n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ma n'ebe ụfọdụ, karịsịa South China, n'oge mgbụsị akwụkwọ bụ mbubreyo ke ọbịbịa na ndị mmadụ na-st ...
Welcome QiXiChinese Ɛpo Day
The Qixi Festival, a makwaara dị ka Queqiao Festival, bụ a Chinese ememme adia na nzukọ kwa afọ nke cowherd na ekwe girl na akụkọ ifo. Ọ dara na 7th ụbọchị nke 7th ọnwa na Chinese kalenda. The ememme sitere ihunanya akụkọ nke abụọ ndị hụrụ, Zhinü an ...
Dusung Refrigeration Major Okpomọkụ 大暑
The omenala Chinese kalenda ọnwa abahade afọ ahụ gaa 24 anyanwụ okwu. Isi Okpomọkụ, (Chinese: 大暑), nke 12 anyanwụ okwu nke afọ, na-amalite afọ a na July 23 na-agwụ August 6. N'oge Major Okpomọkụ, ọtụtụ akụkụ nke China tinye kacha ekpo ọkụ ugbu oge nke afọ.
Summer cheta (夏至) Dusung Refrigeration-agwa gị 2 na-akpa ọchị ihe
The omenala Chinese kalenda ọnwa abahade afọ ahụ gaa 24 anyanwụ okwu. Summer cheta, (Chinese: 夏至), 10th anyanwụ okwu nke afọ, na-amalite na June 21 nke afọ a na-agwụ on July 6. China, 24 anyanwụ okwu e kere ọtụtụ puku afọ gara aga na-eduzi na-akọ ugbo mmepụta. Ma nke ...
Dragon Boat Festival Holiday site 7 ~ 9, June na Dusung Refrigeration
The Dragon Boat Festival, na-akpọ ndị Duanwu Festival, na-eme ememe na ise nke ọnwa nke-ise dị ka Chinese kalenda na 7th, June na 2019 .Mme mgbe niile rie osikapa dumplings ma na-ekiri dragon ụgbọ mmiri agbụrụ na-eme ya. The ememme a na a kasị mara maka ya dragon-ụgbọ mmiri ndị si n'agbụrụ, e ...
Ọka Buds (Chinese: 小满 Small Full), Seeds Of ọka na-aghọ Full Ma bụghị Mfri eke Ma
Ọka Buds, (Chinese: 小满 Small Full), 8th anyanwụ okwu nke a afọ, na-amalite na May 21 na 2019, na-agwụ on June 5. Ọ pụtara na osisi site na ọka na-aghọ full ma na-adịghị na-acha. Na China, 24 anyanwụ okwu e kere ọtụtụ puku afọ gara aga na-eduzi na-akọ ugbo mmepụta. Ma ...
Dusung Refrigeration Factory mmechi N'oge 1st ~ 4th May maka ezumike Of Labor Day
Dusung Refrigeration Factory mmechi N'oge 1st ~ 4th May maka ezumike Of Labor Day, na rusume ọrụ na 5th, May.
Ọka Rain (Chinese: 谷雨), dị ka ndị ikpeazụ okwu na mmiri, na-amalite na April 20 na-agwụ na May 5.
Gịnị bụ n'oge opupu ihe ubi? Dusung Refrigeration ga-agwa gị
The omenala Chinese kalenda ọnwa abahade a afọ n'ime 24 anyanwụ okwu. N'oge opupu ihe ubi (Chinese: 春分), dị ka nke-anọ okwu nke afọ-amalite na March 21 na-agwụ on April 4 afọ a na 2019.The n'oge opupu ihe ubi egosi hà n'ogologo nke ehihie na abalị oge. N'ụbọchị nke Spring Eq ...
Dusung Refrigeration Weta Spring ka Ị
Dusung Refrigeration wetara Spring gị ... The omenala Chinese kalenda ọnwa abahade afọ ahụ gaa 24 anyanwụ okwu. Edemede nke Ụmụ ahụhụ (Chinese: 惊蛰) dara na Mar 6 na-agwụ na Mar 20 a 2019. edemede nke Ụmụ ahụhụ na-egosi a ịrị elu okpomọkụ na ụba mmiri ozuzo ọdịda. Dị ka onye nke atọ s ...
Anyị bụ ndị njikere mgbe nile inyere you.There nwere ọtụtụ ụzọ kpọtụrụ you.You nwere ike idebe anyị na akara. Nye anyị a oku na-aga ma ọ bụ zipu a ihe email.choose ihe suut ị kasị.
# 70 JINSHENG OKPOROỤZỌ ONE, CHENGYANG